Novotel Antananarivo, 11 desambra 2020: Fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana, ara-tsakafo, ara-panabeazana ary ara-piahiana ara-tsosialy ho an’ny ankizy madinika sy ny fianakaviana eto Madagasikara: izany no votoatin’ny hetsika fanentanana avo lenta izay notontosaina androany.
« Samy resilahatra isika fa afaka manova avokoa ny zava-misy iainan’ny ankizy madinika ho an’ny hoavin’i Madagasikara, », hoy ny fanazavan’Andriamatoa PILAZA Tsakorien Jaona Adolphe, Tale Jeneralin’ny Mponina ao amin’ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy.
« Ity atrikasa ity dia dingana voalohany sahady mankany amin’ny fanantenana mba hisian’ny fampivelarana ny ankizy madinika (DPE) izay tsy nomen-danja hatramin’izay teto Madagasikara. Ny fampiroboroboana ny DPE eto Madagasikara dia tsy hamela ny zaza ho velona sy hivelatra fotsiny ihany, fa hampitombo ny fahaiza-manaon’ny olona ary hampiroborobo ny toekarena, ka hamongotra ny fahantrana lalina any amin’ny ho avy, » hoy Andriamatoa Jean Benoit Manhes, solontenan’ny UNICEF mpisolo toerana eto Madagasikara, tao anatin’ny lahateniny.
Vokatry ny tsy fisian’ny angondrakitra mifandraika tsara amin’ny zavatra tadiavina sy ny tsy fananana paik’ady nasionaly ary indrindra indrindra ny tsy fisian’ny famatsiam-bola tokoa mantsy, dia hita fa misy fahatarana goavana eto Madagasikara raha mitaha amin’ireo firenena hafa, ary tena mbola mampanahy ny mikasika ny fampivoarana ny zaza madinika.
Araka ny « Indice du capital humain » napetraky ny Banky iraisam-pirenena, ny zaza teraka eto Madagasikara amin’izao fotoana izao dia tsy hahatratra afa-tsy 37%-n’ny fahafaha-mamokatra, raha oharina amin’ny tokony ho vitany raha toa ka nahazo fanabeazana feno sy fikarakarana ara-pahasalamana araka ny tokony ho izy izany zaza izany. Ankoatr’izany, ny taona 2019 dia nahafahana namantatra ny loza manambana hafa ho an’ny fampivelaravana ny ankizy madinika eto Madagasikara satria 86%-n’ny zaza no teraka ao anaty fahantrana. Maneran-tany dia i Madagasikara no firenena faha-efatra manana taha ambony indrindra amin’ny fahatarana eo amin’ny fitombon’ny zaza latsaky ny 5 taona, satria mahatratra 42% izany taha izany. Ho fanampin’izany, satria moa tsy ampy ny famatsiana ara-bola ho an’ny rafitra fiahiana ara-tsosialy eto Madagasikara dia tsy mahakasika afa tsy 5%-n’ireo olona tena mahantra izany sehatra izany. Araky ny valin’ny fanadihadiana mikasika ny toe-javatra ara-tsosialy sy ara-demografika eny anivon'ny tokantrano (MICS) dia zaza 2 hatramin’ ny 4 taona miisa iray ao anatin’ny efatra ihany no manana fianakaviana mampihatra sy manohana ny fanabeazana ho an’ny zaza madinika. Ary 15%-n’ny zaza 3 hatramin’ ny 4 taona ihany no mandray anjara amin’ny fandaharana mikasika ny fanabeazana ho an’ny ankizy madinika.
Ny firotsahana ao anatin’ny sehatra mahakasika ny ankizy madinika no fanalahidy hahafahana manafaingana ny fanatraran’ny zaza ny fahafaha-manao feno. Araka ny famaritana omen’ny OMS, ny DPE dia manondro ny fitomboana amin’ny lafiny ara-tsaina, ara-batana, ara-piteny, ara-pihetsika, ara-tsosialy ary mikasika ny fientanam-po eo amin’ny zaza manomboka amin’ny fanorotorona azy hatramin’ny faha-valo taonany. Nisy fanadihadiana ara-toekarena naneho fa ny firotsahana feno ao anatin’ny DPE dia ahitana vokatra lehibe: ny dôlara iray arotsaka hamatsiana ny DPE dia mitondra tombony 17 $.
Ny fanentanana ireo mambran’ny governemanta mikasika ny maha zava-dehibe ny fampivelarana ny zaza madinika, ny fampiroborobona ny fifanakalozana ary ny fanapariahana ny fomba fanao tsara no tanjon’ity atrikasa fanentanana avo lenta ity. Ny fikarakarana izany dia tamin’ny alàlan’ny fiaraha-miasan’ny Firenena Mikambana, ny OMS, ny UNICEF sy ny Banky iraisam-pirenena ary nandraisan’ny ministera maromaro voakasik’izany anjara, toy ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy, ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka, ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, ny Ministeran’ny Fitsarana ary ny Birao Nasionaly ho an’ny Sakafo. Ny fanavaozana ireo karazana politika sy paik’ady nasionaly, entina hanehoana ny maha zava-dehibe ny fampivelarana ny ankizy madinika eto amin’ny firenena no tanjon’izany atrikasa izany.
Aorian’ity hetsika fanentanana avo lenta ity izay notanterahana androany ary nandraisan’ny fiadidian’ny Praiministra sy ireo ministera voakasik’izany anjara, dia antenaina fa ahitam-panavaozana ireo karazana politika samihafa ary ho vita rafitra ny paik’ady nasionaly mba hanehoana ny maha zava-dehibe ny fampivoarana ny ankizy madinika eto amin’ny firenena.
Fampivoarana ny ankizy madinika
Emelie, miady amin'ny COVID na eo aza ny kilemany
Na teo aza izany fahalemeny izany dia tsy nijanona niasa i Emelie mba hanampiana ny filàn'ny ankohonany.
Andriavina, tanora mafana fo mandray andraikitra
Andriavina koa dia liana amin'ny olana mifandraika amin'ny famatsiam-bolam-panjakana amin'ny sehatry ny sahanin'ny fikambanan'ny fiarahamonim-pi